[Montage]—Isiteshi sikaloliwe, iLouvre Square, ikhaya elilula neliwubukhazikhazi - I-Airbnb
[Montage]—Isiteshi sikaloliwe, iLouvre Square, ikhaya elilula neliwubukhazikhazi
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-漫活
U-漫活 Ungumbungazi ovelele
Ngingumthwebuli wezithombe.Ngiye ezindaweni eziningi ngomsebenzi wokuthwebula.Sengike ngahlala emahostela amaningi,emahhotela nasezindlini zezivakashi. Okwangihlaba umxhwele ngokujulile ukuthi umnikazi wendawo wabungaza ngemfudumalo izindlu zezivakashi eTaiwan naseJapane, futhi ukuhlelwa kwendlu kubonisa ubuntu nobuhle bomninindlu. Nginothando olujulile ngezindawo zokuhlala. Ngo-2019, mina nomndeni wami sasungula uhlobo oluthi "Manhuo Homestay".
Kungani ibizwa nge-"Manhuo"? Ngifuna ukuphila impilo yothando, ethokozisayo, nenethezekile. Ngihlanganisa le mibono endaweni yokuhlala, futhi ngikholwa ukuthi ungayizwa.
[Uhlobo Lwesitezi] Lena isethi yesikhala esingaqondakali se-psychedelic esikhanyayo nesinethezeka, esikulethela umuzwa omangalisayo wesikhathi nokuhamba emkhathini. Zonke izinhlobo zezincwadi zilungiswa ekamelweni, ungazifunda ngendlela othanda ngayo. Kumnandi kakhulu ukubuka ifilimu ndawonye kusofa omkhulu. Amanzi amaminerali asemabhodleleni anikezwa mahhala, futhi isiphakeli samanzi singasetshenziselwa ukupholisa nokufudumeza. Izingubo zokulala ziwubukhazikhazi kakhulu, futhi isethi eneziqephu ezine yenziwe ngomklami-"Xia Lu", ukotini we-satin ende, ukuthinta okufana nosilika, ukhiye muhle kakhulu. Enye isethi yokulala i-Bohemian efekethisiwe, engiyithanda kakhulu.
[Indlu yangasese] Kunikezwa amanzi ashisayo amahora angama-24, isixubho samahhala, umuthi wokuxubha, ikamu, insipho yomzimba kanye neshampoo. Amathawula namathawula okugeza asebenzisa uhlobo lwe-"CASTLE GARDEN" oluthunyelwa e-Japan. Kunemishini yokuwasha ezenzakalela ngokuphelele, okokuwasha izingubo, iziphanyeko, okokuzisiza
[Izinzuzo] Umphakathi utholakala endaweni yebhizinisi elichumayo entshonalanga yeDazhou, enezinsiza ezivuthiwe ezisekelayo nezinto zokuhamba ezikahle. Iseduze kakhulu nesiteshi sikaloliwe, futhi iwuhambo lwemizuzu engu-15 kuphela. Kunendawo yokupaka engaphansi komhlaba emphakathini. Imali encane yokupaka ama-yuan angu-5 kanti ikhephu ingu-15 yuan. Indlu ifakwe i-smart code lock, ikhodi eyodwa ikhasimende ngalinye, awukho ukhiye odingekayo ukuze ungene futhi uphume. Ngemuva kokuthi ukubhuka kube yimpumelelo, uzonikezwa imihlahlandlela yokungena eyingcaca nemibhalo futhi ujabulele isevisi enakekelayo.
Ukuze ugcine igumbi lihlanzekile futhi lihlelekile, azikho izinto zasekhishini, ngakho awukwazi ukupheka.
Kunezindawo zokudlela eziningi nokudla okulula endaweni ezungezile. Kukhona "iphalishi lezwe" kanye "nezikebhe zesibindi ze-Xiaojun" maqondana nomnyango omkhulu, kanye "nebhodwe lesobho lenyama yesitayela sase-Sichuan", "i-tavern endala yama-60s", "inyama yenkomo ye-bean curd" kanye "zama amadombolo amasha" emnyango ongemuva. Esitezi sokuqala sekheshi, ungaya esitolo esikhulu se-"Duo Yiduo". I-Rural Credit Cooperatives, iBhange laseChina, ne-Panzhihua Commercial Bank asesangweni lomphakathi.
U漫活 Ungumbungazi ovelele